SEM maka Ecommerce - Gini mere iji ya na usoro ahia gi? | ECommerce ozi ọma
SEM maka Ecommerce - Gini mere iji ya na usoro ahia gi?
SEM dị mkpa maka ibe weebụ ọ bụla enweghi ajuju banyere nke a, n’agbanyeghi, enwere ihe ndi kwesiri iji me ka ahia ecommerce tinye uche na nka usoro nyocha ahịa engine. Anyị ga-agwa gị okwu n'okpuru ihe kpatara ị ga-eji jiri SEM maka Ecommerce na usoro ahia gị.
1 Kedu ka SEM si enyere Ecommerce gị aka?
1.1 Mee ka ọnụọgụ weebụ
1.2 Nyocha ọdịnaya
1.3 Na-erite uru nke ihe omume oge
2 Gosi na elu nsonaazụ ọchụchọ
Kedu ka SEM si enyere Ecommerce gị aka?
Mee ka ọnụọgụ weebụ
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka nnukwu ego, ndị ahịa ọchụchọ engine ọ bụ n'ezie ọwa bara ezigbo uru na-agụnye obere ihe egwu. Ọ bụrụ n'iji ụdị PPC, ị ga-akwụ ụgwọ naanị mgbe onye ọrụ pịa n'ezie na mgbasa ozi gị. Ọbụna ndị ọrụ kpebiri ịpị egosiworị mmasị na onyinye gị, nke pụtara na ị ga-enwe okporo ụzọ tozuru etozu.
Ule bu ihe di oke mkpa iji guzobe a nnukwu saịtị ecommerceAgbanyeghị, SEO nwere ike were ọnwa were rụpụta nsonaazụ. N'ụzọ dị iche, nyocha ịkwụ ụgwọ na-enye gị ohere ịnwale ibe ọdịda gị ozugbo. Nwere ike mgbe ahụ na-ebuli kacha mma n'ịrụ peeji nke mere na ha nwere ike ọkwá organically.
Na-erite uru nke ihe omume oge
para ememme n'oge dị ka Krismas, Black Friday ma ọ bụ Motherbọchị Ndị NneNwere ike ịmeworị peeji nke ọdịda gị niile dị mkpa. Nsogbu bụ na mgbe ị na-emeso ihe omume oge, ibe ndị a nwere ike ịnata obere okporo ụzọ SEO. Na SEM maka Ecommerce, ị nwere ike iji ụfọdụ okwu ọchụchọ nke ndị na-azụ ahịa n'oge oge na-achọ, iji kwalite peeji ndị ahụ n'oge kwesịrị ekwesị ma bawanye ụba nke okporo ụzọ a na-enweta n'oge mmemme ahụ dị oke mkpa maka azụmahịa e-commerce.
Gosi na elu nsonaazụ ọchụchọ
Dị ka ya Enwere ike iji SEM dị ka SEO dị ka usoro mgbakwunye. Nke ahụ bụ, ịpụta ọtụtụ oge na peeji nsonaazụ ọchụchọ na-eme ka o nwekwuo ohere na onye ọrụ ga-pịa Ecommerce gị. Yabụ ọ bụrụgodi na ogogoro na nsonaazụ ọchụchọ akwụbururịrị ahazi nke ọma, ọ ka nwere ike ịbawanye na ntanetị ịntanetị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » SEM » SEM maka Ecommerce - Gini mere iji ya na usoro ahia gi?
Ecommerce Akwụkwọ Nsọ
Gịnị bụ agba ndị ọbịa na ihe bụ uru ya